စိတ်သစ် လူသစ်နဲ့ နှစ်သစ်ကို ဖြတ်သန်းနိုင်စေဖို့ - For her Myanmar
စိတ်သစ် လူသစ်နဲ့ နှစ်သစ်ကို ဖြတ်သန်းနိုင်စေဖို့
by Hnin Ei Oo
ထုံထုံထိုင်းထိုင်းဖြစ်နေရင် ဝင်ဖတ်လိုက်ပါ၊ စိတ်ပြန်ကြည်လာပါလိမ့်မယ်…
ကဲ အခု…၂၀၁၉ ဆိုတဲ့နှစ်သစ်ကို ရောက်လာပြီနော်။ ဘာလိုလိုနဲ့ နှင်းယောင်းတို့နဲ့အတူတူရှိခဲ့တာ ၁ နှစ်တောင်ပြည့်တော့မယ်။ လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ယုံကြည်ချက်ရှိရှိနဲ့ နေ့ရက်တိုင်းကိုအားအင်အပြည့် ဖြတ်သန်းနိုင်ဖို့အတွက် အလှအပ၊ ဖက်ရှင်၊ ချစ်ရေးချစ်ရာ၊ ကိုယ်ကာယကျန်းမာရေး စတဲ့အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေကို ဆောင်းပါးလေးကနေတစ်ဆင့် ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ခဲ့လို့ နှင်းကဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရပါတယ်။
ယောင်းလေးရေ… ယောင်းလေးရဲ့စိတ်ထဲမှာ ‘အချိန်တစ်နှစ်တောင်ကုန်သွားပြီ၊ ငါ့အတွက်ဘာမှလည်း မတိုးတက်လာပါလား’ ဆိုတဲ့စိတ်မျိုး ဖြစ်နေလား? ငါဒီလောက်ကြိုးစားရဲ့သားနဲ့ ကိုယ်ထင်သလောက် အနေအထားအထိ ဖြစ်မလို့ စိတ်ထဲမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မကျေမနပ်ဖြစ်နေလား? ကိုယ်ကအကောင်းဆုံး တည်ဆောက်ရဲ့သားနဲ့ ကိုယ့်အတွက်အကောင်းဆုံးတွေဖြစ်မလာလို့ စိတ်ပျက်နေလား? အခုဆောင်းပါးလေးကို ဖတ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ ဒီစိတ်တွေအားလုံးကို အဝေးခဏပို့ထားပြီး နှင်းနဲ့အတူတူ ဘဝသစ်တစ်ခုကို ခဏလောက်ပုံဖော်ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။
Related Article >>> သိပ္ပံနည်းကျ စိတ်အားတက်ကြွအောင် ဘယ်လို လုပ်မလဲ?
လူတစ်ယောက်မှာ အရေးကြီးဆုံးက ဘာလဲလို့မေးရင် ‘စိတ်’ ကအရေးကြီးဆုံးပါပဲ။ ကိုယ့်စိတ်ရဲ့စေရာကို ကောင်းသည်ဖြစ်စေ၊ မကောင်းသည်ဖြစ်စေ နှင်းတို့ယောင်းတို့ အားလုံးက လိုက်လုပ်နေကြတာပါပဲ။ ဒါကြောင့် တခြားအရာတွေကို မဖြည့်ဆည်းသေးရင်တောင် ကိုယ့်စိတ်ကိုယ် အရင်နိုင်အောင် သေချာတည်ဆောက်ပါ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်လိုအခြေအနေပဲဖြစ်ဖြစ် ငါရအောင် လုပ်နိုင်တယ်၊ လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်မျိုးပဲထားပြီး အခက်အခဲတွေကို တုံးတိုက်တိုက် ကျားကိုက်ကိုက်ရအောင် ရင်ဆိုင်လိုက်ပါ။ ခက်ခဲလည်း ခဏပဲဆိုတဲ့စိတ်မျိုးထားပြီး အသက်ကိုဝဝရှုရင်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြန်စိန်ခေါ်ကြည့်လိုက်ပါ။ ထင်သလောက်မခက်ခဲမှန်း တွေ့လာပါလိမ့်မယ်။
ပြီးတော့ အလှအပနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း ကိုယ့်မှာတွေ့သမျှဆောင်းပါးတွေဖတ်၊ ဗီဒီယိုတွေကြည့်ပြီး အနောက်ကလိုက်ပြင်ပေမဲ့ ကိုယ်မှန်းသလောက်လက်ရာမထွက်လို့ စိတ်ပျက်နေပြီလား။ ဘာမှစိတ်မပျက်ပါနဲ့ယောင်းရဲ့ နှင်းလည်းမိတ်ကပ်စပြင်တုန်းက မျှော့မျက်ခုံး၊ သရဲမိတ်ကပ်၊ ပန်းသီးပါးနဲ့ မည်းနက်နေတဲ့ လိုင်နာဘဝကနေ စခဲ့ရတာပါ။ အရင်တုန်းကဘယ်လိုအထိ ထင်လဲဆိုရင် မိတ်ကပ်ဆိုတာကပန်းချီအမျိုးအစားပဲဆိုတော့ ငါ့မှာမျဉ်းတောင်ဖြောင့်အောင် မတားနိုင်တာကို ဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်ထွန်းမှာလဲဆိုပြီး စိတ်ဓာတ်တွေ တဖုံးဖုံးကျခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း စာတွေဖတ်၊ ဗီဒီယိုကြည့်တဲ့အပြင် သူတို့နည်းကို ဘယ်လိုကွန့်လိုက်ရင်တော့ ကိုယ်နဲ့ပိုအဆင်ပြေမလဲ ဆိုတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကိုပါ ရှာတတ်လာတော့ ဖြည်းဖြည်းနဲ့သူ့ဘာသာ ကြည့်ကောင်းတဲ့အနေအထားလေးတစ်ခုအထိတော့ ပြင်တတ်သွားတာပဲ။ အာ့ကြောင့် ယောင်းလေး ဘာမှစိတ်ဓာတ်မကျနဲ့။ မှားရင်း လေ့ကျင့်ရင်းပဲ သူ့ဘာသာအချိန်တစ်ခုကြာရင် အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်။
Related Article >>> အောင်မြင်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေ ပေးတဲ့ ဘဝသင်ခန်းစာ (၅)ခု
အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော့ ဘာမှအထွေအထူး ပြောနေစရာမရှိပါဘူး။ ဘဝမှာ အချစ်ထက်အများကြီး အရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စတွေ ရှိနေတယ်ဆိုတာ ယောင်းစိတ်ထဲမှာ သိနေရင်ကို တော်တော်အခြေအနေကောင်းနေပါပြီ။ ကိုယ်ကာယလေ့ကျင့်ခန်းကတော့ လှဖို့အထိမသွားနိုင်သေးရင်တောင် ယောင်းချစ်တဲ့လူတွေနဲ့ အချိန်အကြာကြီး အတူရှိနေနိုင်အောင် တစ်နေ့တစ်နာရီလောက်ဖြစ်ဖြစ် အချိန်ပေးပြီး ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုလေးတော့ လုပ်ပေးပါ။ ကိုယ်ကျန်းမာမှ စိတ်ချမ်းသာဖို့အတွက် နည်းလမ်းကောင်းတွေကို ပိုပြီးရှာနိုင်မှာပေါ့လို့။
နှစ်ဟောင်းမှာရှိသမျှစိတ်ညစ်စရာတွေကို ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း အကုန်လက်ခံနိုင်အောင် ကြိုးစားပြီး နှစ်သစ်အထိမယူသွားဘဲ ထားရစ်ခဲ့ပါ။ အညစ်အကြေးတွေကိုလည်း အမှိုက်ထုပ်စွန့်သလို စွန့်ထုတ်ပြီး ဘယ်အရာမဆို ကိုယ်လုပ်ကိုလုပ်နိုင်တယ် ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးထားပြီး အခက်အခဲတွေကို ကျော်လွှားရင်းအနိုင်ယူပါ။ နောက်ပြီး ကိုယ်မှားခဲ့တဲ့ အမှားတွေအတွက်လည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြန်ခွင့်လွှတ်တတ်ပါစေနော်။ ဒါမှလည်း စိတ်သစ်၊ လူသစ်နဲ့ နှစ်သစ်မှာ ပြဿနာအသစ်တွေကို စိန်ခေါ်နိုင်မှာပေါ့။ အယ်လဲ့ 😛
Hnin Ei Oo (For Her Myanmar)
> Unicode >>>
ထုံထုံထိုငျးထိုငျးဖွဈနရေငျ ဝငျဖတျလိုကျပါ၊ စိတျပွနျကွညျလာပါလိမျ့မယျ…
ကဲ အခု…၂၀၁၉ ဆိုတဲ့နှဈသဈကို ရောကျလာပွီနျော။ ဘာလိုလိုနဲ့ နှငျးယောငျးတို့နဲ့အတူတူရှိခဲ့တာ ၁ နှဈတောငျပွညျ့တော့မယျ။ လူတဈယောကျအနနေဲ့ ပတျဝနျးကငျြမှာ ယုံကွညျခကျြရှိရှိနဲ့ နရေ့ကျတိုငျးကိုအားအငျအပွညျ့ ဖွတျသနျးနိုငျဖို့အတှကျ အလှအပ၊ ဖကျရှငျ၊ ခဈြရေးခဈြရာ၊ ကိုယျကာယကနျြးမာရေး စတဲ့အခွခေံလိုအပျခကျြတှကေို ဆောငျးပါးလေးကနတေဈဆငျ့ ဖွညျ့ဆညျးပေးနိုငျခဲ့လို့ နှငျးကဝမျးသာပီတိဖွဈရပါတယျ။
ယောငျးလေးရေ… ယောငျးလေးရဲ့စိတျထဲမှာ ‘အခြိနျတဈနှဈတောငျကုနျသှားပွီ၊ ငါ့အတှကျဘာမှလညျး မတိုးတကျလာပါလား’ ဆိုတဲ့စိတျမြိုး ဖွဈနလေား? ငါဒီလောကျကွိုးစားရဲ့သားနဲ့ ကိုယျထငျသလောကျ အနအေထားအထိ ဖွဈမလို့ စိတျထဲမှာ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ မကမြေနပျဖွဈနလေား? ကိုယျကအကောငျးဆုံး တညျဆောကျရဲ့သားနဲ့ ကိုယျ့အတှကျအကောငျးဆုံးတှဖွေဈမလာလို့ စိတျပကျြနလေား? အခုဆောငျးပါးလေးကို ဖတျနတေဲ့အခြိနျမှာတော့ ဒီစိတျတှအေားလုံးကို အဝေးခဏပို့ထားပွီး နှငျးနဲ့အတူတူ ဘဝသဈတဈခုကို ခဏလောကျပုံဖျောကွညျ့လိုကျရအောငျနျော။
Related Article >>> သိပ်ပံနညျးကြ စိတျအားတကျကွှအောငျ ဘယျလို လုပျမလဲ?
လူတဈယောကျမှာ အရေးကွီးဆုံးက ဘာလဲလို့မေးရငျ ‘စိတျ’ ကအရေးကွီးဆုံးပါပဲ။ ကိုယျ့စိတျရဲ့စရောကို ကောငျးသညျဖွဈစေ၊ မကောငျးသညျဖွဈစေ နှငျးတို့ယောငျးတို့ အားလုံးက လိုကျလုပျနကွေတာပါပဲ။ ဒါကွောငျ့ တခွားအရာတှကေို မဖွညျ့ဆညျးသေးရငျတောငျ ကိုယျ့စိတျကိုယျ အရငျနိုငျအောငျ သခြောတညျဆောကျပါ။ ဘာပဲဖွဈဖွဈ၊ ဘယျလိုအခွအေနပေဲဖွဈဖွဈ ငါရအောငျ လုပျနိုငျတယျ၊ လုပျမယျဆိုတဲ့ စိတျမြိုးပဲထားပွီး အခကျအခဲတှကေို တုံးတိုကျတိုကျ ကြားကိုကျကိုကျရအောငျ ရငျဆိုငျလိုကျပါ။ ခကျခဲလညျး ခဏပဲဆိုတဲ့စိတျမြိုးထားပွီး အသကျကိုဝဝရှုရငျး ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ပွနျစိနျချေါကွညျ့လိုကျပါ။ ထငျသလောကျမခကျခဲမှနျး တှလေ့ာပါလိမျ့မယျ။
ပွီးတော့ အလှအပနဲ့ပတျသကျပွီးတော့လညျး ကိုယျ့မှာတှသေ့မြှဆောငျးပါးတှဖေတျ၊ ဗီဒီယိုတှကွေညျ့ပွီး အနောကျကလိုကျပွငျပမေဲ့ ကိုယျမှနျးသလောကျလကျရာမထှကျလို့ စိတျပကျြနပွေီလား။ ဘာမှစိတျမပကျြပါနဲ့ယောငျးရဲ့ နှငျးလညျးမိတျကပျစပွငျတုနျးက မြှော့မကျြခုံး၊ သရဲမိတျကပျ၊ ပနျးသီးပါးနဲ့ မညျးနကျနတေဲ့ လိုငျနာဘဝကနေ စခဲ့ရတာပါ။ အရငျတုနျးကဘယျလိုအထိ ထငျလဲဆိုရငျ မိတျကပျဆိုတာကပနျးခြီအမြိုးအစားပဲဆိုတော့ ငါ့မှာမဉျြးတောငျဖွောငျ့အောငျ မတားနိုငျတာကို ဘယျလိုလုပျဖွဈထှနျးမှာလဲဆိုပွီး စိတျဓာတျတှေ တဖုံးဖုံးကခြဲ့ဖူးပါတယျ။ ဒါပမေဲ့လညျး စာတှဖေတျ၊ ဗီဒီယိုကွညျ့တဲ့အပွငျ သူတို့နညျးကို ဘယျလိုကှနျ့လိုကျရငျတော့ ကိုယျနဲ့ပိုအဆငျပွမေလဲ ဆိုတဲ့နညျးလမျးလေးတှကေိုပါ ရှာတတျလာတော့ ဖွညျးဖွညျးနဲ့သူ့ဘာသာ ကွညျ့ကောငျးတဲ့အနအေထားလေးတဈခုအထိတော့ ပွငျတတျသှားတာပဲ။ အာ့ကွောငျ့ ယောငျးလေး ဘာမှစိတျဓာတျမကနြဲ့။ မှားရငျး လကေ့ငျြ့ရငျးပဲ သူ့ဘာသာအခြိနျတဈခုကွာရငျ အဆငျပွသှေားလိမျ့မယျ။
Related Article >>> အောငျမွငျတဲ့ အမြိုးသမီးတှေ ပေးတဲ့ ဘဝသငျခနျးစာ (၅)ခု
အခဈြရေးနဲ့ပတျသကျပွီးတော့တော့ ဘာမှအထှအေထူး ပွောနစေရာမရှိပါဘူး။ ဘဝမှာ အခဈြထကျအမြားကွီး အရေးကွီးတဲ့ ကိစ်စတှေ ရှိနတေယျဆိုတာ ယောငျးစိတျထဲမှာ သိနရေငျကို တျောတျောအခွအေနကေောငျးနပေါပွီ။ ကိုယျကာယလကေ့ငျြ့ခနျးကတော့ လှဖို့အထိမသှားနိုငျသေးရငျတောငျ ယောငျးခဈြတဲ့လူတှနေဲ့ အခြိနျအကွာကွီး အတူရှိနနေိုငျအောငျ တဈနတေ့ဈနာရီလောကျဖွဈဖွဈ အခြိနျပေးပွီး ကိုယျလကျလှုပျရှားမှုလေးတော့ လုပျပေးပါ။ ကိုယျကနျြးမာမှ စိတျခမျြးသာဖို့အတှကျ နညျးလမျးကောငျးတှကေို ပိုပွီးရှာနိုငျမှာပေါ့လို့။
နှဈဟောငျးမှာရှိသမြှစိတျညဈစရာတှကေို ဒီရကျပိုငျးအတှငျး အကုနျလကျခံနိုငျအောငျ ကွိုးစားပွီး နှဈသဈအထိမယူသှားဘဲ ထားရဈခဲ့ပါ။ အညဈအကွေးတှကေိုလညျး အမှိုကျထုပျစှနျ့သလို စှနျ့ထုတျပွီး ဘယျအရာမဆို ကိုယျလုပျကိုလုပျနိုငျတယျ ဆိုတဲ့စိတျမြိုးထားပွီး အခကျအခဲတှကေို ကြျောလှားရငျးအနိုငျယူပါ။ နောကျပွီး ကိုယျမှားခဲ့တဲ့ အမှားတှအေတှကျလညျး ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ပွနျခှငျ့လှတျတတျပါစနေျော။ ဒါမှလညျး စိတျသဈ၊ လူသဈနဲ့ နှဈသဈမှာ ပွဿနာအသဈတှကေို စိနျချေါနိုငျမှာပေါ့။ အယျလဲ့ 😛
Tags: better, life, Motivation, new, resolution, SITUATION, throw, trash, year
နှစ်သစ်အတွက် ချစ်သူနဲ့အတူလုပ်သင့်တဲ့ နှစ်ကိုယ်တူ နှစ်သစ်ရည်မှန်းချက်များ
Hnin Ei Oo January 1, 2019
ဖုန်းဘက်ထရီက ဘာလို့ ခဏခဏ ကုန်နေရတာလဲ?
Phyu Thant June 27, 2019
လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ အထာကျကျ ဈေးဗန်းခင်းနိုင်မယ့် နည်းလမ်း (၄)သွယ်
Ei Mon May 30, 2019
ဒီအချက် (၄)ချက်ကို သူနာပြုဆရာမလေးတွေသာ နားလည်နိုင်မှာပါ။
Yin Sandi Ko May 24, 2019
Sugar Cane May 21, 2019
စကွင်းကဲလား? အလှကုန်ပစ္စည်းလား? ဘယ်ဟာက ပိုခေတ်စားနေတယ်လို့ထင်လဲ???
Hnin Ei Oo May 2, 2019